Fepetra fampiasana - Quotes Pedia
1. FIVORIANA MANARAKA. Ireo fepetra fampiasana ireo dia fepetra fifanarahana mifamatotra ("Fifanarahana) eo aminareo sy Quotespedia (" izahay "," isika "," our "). Amin'ny fidirana an'ity tranokala ity (ilay «Site») dia ekenao ny fampahafantarana mahasahana ireo Karazan-kevitra momba ny fampiasana sy ny fifanarahana hofehezin'ity fiteny eto ity.
2. NY DIDIKA FIVORIANA. Mino izahay raha mangarahara rehefa miresaka momba ny fanaonay manokana sy ny fanangonam-baovao, ka namoaka a politika fiarovana fiainan'olona ho an'ny fanitarana.
3. FIVORIANA USERANA. Nomenao alalana izahay hampiasa ireo fitaovana alefanao amin'ilay tranokala. Amin'ny alàlan'ny fandefasana, fisintonana, fampisehoana, fampisehoana, fandefasana, na fandefasana vaovao na votoaty hafa («Ny votoatin'ny mpampiasa») dia omenao anay, izahay mpiray antoka, tompon'andraikitra, tompon'andraikitra, mpiasa, mpanolo-tsaina, mpisolo vava, ary mpisolo vava iray mampiasa lisansa hampiasa ny. Ny votoatin'ny mpampiasa mifandraika amin'ny asan'ny orinasa, anisan'izany ny tsy misy fetrany, ny zon'ny mandika, mizara, mamita, mampiseho ny ampahibemaso, manao ampahibemaso, mamerina, manova, handika ary mamerina ny votoatin'ny mpampiasa. Tsy ho voaloa ianao na amin'ny atiny momba ny mpampiasa. Manaiky ianao fa mety hamoaka izahay na hanambara ny anaranao mifandraika amin'ny votoatin'ny mpampiasa anao. Amin'ny fandefasanao ny votoatin'ny mpampiasa amin'ny tranonkala, manome alalana ianao ary misolo tena anao fa manana alalana amin'ny votoatin'ny mpampiasa ianao na manana alalana handefa, mizara, mampiseho, manao, mampita, na mizara azy amin'ny fomba hafa.
4. MPANOMPOANA MBA FANAOVANA ARY INDRINDRA. Rehefa miditra na mampiasa an'ity tranokala ity ianao dia manaiky hanaja ny zon'ny fananan'ny hafa arak'asa. Ny fampiasana ny tranonkala dia fehezin'ny fotoana rehetra ary mifototra amin'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona, ny marika, ary ny lalàna momba ny fananana ara-tsaina. Manaiky ianao ny tsy handefa, hisintona, hiseho, hanao, handefasana, na hanaparitaka ny mombamomba anao na ny votoatiny (tahiry, "afa-po") amin'ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona na marika, na fananana ara-tsaina na zon'ny fananana. Manaiky ny hanaraka ny lalàna momba ny fananana zon'ny mpamorona ny copyright sy ny fampiasana fananana ara-tsaina ianao, ary ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny fanitsakitsahana ireo lalàna mifandraika ary amin'ny fandikan-dalàna ny zon'ny antoko fahatelo nateraky ny votoatiny nomenao na fandefasanao. Ny enta-mavesatra manaporofo fa misy afa-po tsy manitsakitsaka lalàna na zon'ny antoko fahatelo miorina aminao irery.
5. FIVORIANA INAPPROPRIATE. Manaiky ianao tsy handefa, hisintona, hiseho, hanao, handefa, na hanaparitaka izay atiny ao amin'ilay tranokala fa (a) maloto, manala baraka, maneso, mamoafady, manararaotra, na mandrahona; (b) mandroso na mandrisika ny fitondran-tena mety ho heloka bevava, manome andraikitra ny sivily, na raha tsy izany dia mandika ny lalàna na ny lalàna na eo an-toerana na fanjakana, na firenena, na vahiny; na (c) manambara na manontany vola amin'ny fomba hafa na famonoana entana ho an'ny entana na serivisy. Izahay dia manana ny zo hanajanonana ny fahazoanao, ny fifindranao, na ny fizarana fitaovana hafa amin'ny fampiasana ny tranokala, ary, raha ilaina izany, dia mamafa ny fitaovana toy izany amin'ny mpizara. Izahay dia mikasa ny hiara-hiasa feno amin'ireo tompon'andraikitra na masoivoho fampiharana rehetra amin'ny famotopotorana momba ny fanitsakitsahana ireo Fampiharana ireo amin'ny lalàna na amin'ny lalàna mifandraika amin'izany.
6. TSY MISY FANDROSOANA. METY HANOTRA NY ZAN'OLAKA AZO ANAO ANAO ANAO "ASA IZANY" TSY HANOTRA NY FAHAMAROANA. AZONAO AZO ATAO NY TOKONY AN-TRANO ARY DIKA NO FAHATELO AZY ARY AZONAO, NA INDRINDRA AN-TOKATSIKA, NY SIDA. HITANAO AN-TSARA MAXIMUM DIA NAMPIASA NY FANAZAVANA, AZA ATAO HANAMPIANA NY FAHAFATESANA ARY IZAY REHETRA, FAMPISEHOANA NA FAMPANGARANA, MITOMPOKO NY SIDA, MITOMBOHY, TSY MAHAY MITADIAVANA, AZONY MBOLA MAMPISEHOANA NY FAHAFATESANA, FAMPISEHOANA ARY FANAVOLANA, FAMPISEHOANA ARY FAHAGANANA, FAMPISEHOANA. TSY MAZOTRA ISIKA FA HANANAO NY SITRAPO AZY ATAO AZY ATAO ATAO NY FAHAKAKO, ARY TSY HITANAO INDRINDRA NY FOTOTRA NY ZANAKA, NA HITANAO VOLANA.
7. FAHADIANA AZONAO. NY LIABILITIORO ANAO AMINY AZY ATAO. HITANAO AN-TRANO MAXIMUM DIA NAMPIASA NY FANAZAVANA, INDRINDRA AZONY MBOLA AZONAO AZONAO AZONAO MBOLA DAHOLO ANY ANY (TSY TOKONY, TSY HITOMBOHANA, FAMPISEHOANA, FANOMPOANA, NA FAMPISEHOANA DAHOLO, AZONAO AZO ATAO, NA FAHAFATESANA NY FAMPISEHOANA ) MITENY AZY ARY AZONY AMIN'NY FIKAROANA ARY AN-TRANO NA ZAVATRA TSY HAFA SAFIDY NA FAMPIDORANA AZONAO ANY amin'ny SIDA. Ity fetra ity dia mihatra na manao ahoana na manao ahoana ny fahavoazana vokatry ny fanitsakitsahana ny fifanekena, fampijaliana, na fomba fiasa ara-dalàna na fihetsika.
8. SITESY AFAKA MISY. Azontsika atao ny miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka sy mpiara-miasa maro izay mety hifamatotra ao anatin'ny tranokala. Satria tsy manana fifehezana ny votoatiny sy ny fanatontosana ireo tranonkala mpiara-miasa sy mpiara-miasa ity isika, tsy mampanantena na manome antoka momba ny marina, ny atiny, na ny kalitaon'ny fampahalalana nomen'ireo tranonkala ireo, ary mieritreritra izahay fa tsy tompon'andraikitra amin'ny zavatra tsy tiana sy tsy ekena, Ny votoatiny tsy misy diso, diso na diso tsy ara-dalàna mety honina ao amin'ireny tranokala ireny. Toy izany koa, miaraka amin'ny fampiasana ny tranokala ianao, mety mahazo miditra amin'ny atiny atiny (tafiditra ao, fa tsy voafetra ho an'ny tranokala) izay fananan'ny antoko fahatelo. Ekenao ary manaiky ianao fa tsy manome antoka momba izany izahay, ary tsy ekenay ny hoe, ny marina, ny vola, ny atiny, na ny kalitao amin'ity atiny fahatelo ity, ary raha tsy omena amin'ny fomba mazava, ireo Fitsipika fampiasana ireo dia hitantana ny fampiasana anao amin'ny ary ny votoatin'ny antoko fahatelo.
9. NY FAMPIASA AZY. Mametraka ny fetra sasany amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana amin'ny tranonkala ity izahay. Voarara ny fanitsakitsahana na ny fanandramana hanitsakitsaka ny endri-pananana amin'ny tranokala, anisan'izany, tsy misy fetra, (a) fidirana atiny na data tsy natao ho anao, na fidirana amin'ny mpizara na kaonty izay tsy nahazoanao alàlana hidirana; (b) manandrana manadihady, mizana, na mizaha ny fitavanan'ny tranokala, na rafitra na tambajotra mifandraika amin'izany, na hanitsakitsahana ny fepetra fiarovana na fanamarinana nefa tsy nahazoana alàlana; (c) manelingelina na manandrana manelingelina serivisy amin'ny mpampiasa, mpampiantrano, na tambajotra, anisan'izany, tsy misy fetra amin'ny alàlan'ny fandefasana otrik'aretina amin'ny tranokala, be loatra, "tondradrano," "spamming," "baomba mandefa", na "doza;" (d) mampiasa ny tranokala handefasana mailaka tsy voamarina, anisan'izany, tsy misy fetra, fampiroboroboana na dokambarotra amin'ny vokatra na serivisy; (e) manadino ny lohateny fonosana TCP / IP na amin'ny ampahany amin'ny fampahalalana an-dàlana ao amin'ny e-mail na amin'ny fandefasa mampiasa ny tranokala; na (f) manandrana manova, injeniera miverina, manimba, mampivadika, na mampihena na manandrana mampihena amin'ny endrika takatry ny sain'olombelona izay mety ho fanta-daza ampiasaintsika amin'ny fanomezana ny Site. Voariririra anao bebe kokoa ny mandika izay atiny amin'ny tranokala, na amin'ny fomba maimaim-poana na amin'ny alàlan'ny automatique, nefa tsy nahazoana alalana avy aminay. Ny fanitsakitsahana ny rafitra momba ny rafitra na ny tambajotra dia mety mahatonga anao hanana andraikitra sivily sy / na heloka bevava.
10. onitra. Manaiky ny hanome toky anay izahay amin'ny sasany amin'ny zavatra nataonao sy ny tsy fahazoanao. Manaiky ny hanome karama sy hiaro ary hihazona tsy manimba anay na inona na inona, ny fatiantoka, ny fatiantoka, ny fatiantoka, ny fahavoazana, ary / na ny vidiny (ao anatin'izany ny saram-pitondrana sy ny vidin-kafatra azo antoka) nipoitra tamin'ny fidiranao na nampiasa ny tranonkala, ny fandikanao. amin'ireto andalana fampiasana ireto, na ny fandikan-dalàna anao, na ny fanitsakitsahana ny mpampiasa mpampiasa ny kaontinao, ny fananana ara-tsaina na ny zon'ny hafa rehetra. Ampahafantariko anao haingana ny amin'izay fitakiana, fahaverezanao, ny fatiantoka, na ny fangatahana, ary hanome fanampiana anao amin'ny alàlan'ny fandanianao ianao, amin'ny fandanianao, amin'ny fiarovana ny fangatahana, ny fatiantoka, ny fatiantoka, ny fanimbana na ny vidiny.
11. FAHORIANA; Fisintahana. Raha, noho ny antony rehetra, ny fitsarana manam-pahefana mahay dia misy fepetra na fepetra ao amin'ireto andalana fampiasana ireto dia tsy ho voatazona, hijanona ho feno sy ampiharina ny fepetra rehetra sy ny fepetra. Tsy misy fandavoana ny fandikan-dalàna na inona na inona omena ireto fepetra ireto: tsy tokony hialana amin'ny tsy fanarahan-dalàna, na ny fifanarahana, na ny fandikan-dalàna teo aloha na ny fepetra hafa, ary tsy tokony hisy ny fampiharana raha tsy atao fanoratana an-tsoratra ary nosoniavin'ny manam-pahefana iray. solontenan'ilay antoko mandà.
12. TSY MISY FAHAMARINANA. Tsy misy zavatra azo ao amin'ny tranokala izay tokony ho takatra amin'ny fahazoan-dàlana anao hampiasa ny marika famantarana, marika tolotra, na logos izay anay na ireo antoko fahatelo.
13. FANITSIANA. Izahay dia manana ny zo hanova ireo fepetra ireo ary hanao izany amin'ny famoahana fampilazana ao amin'ilay tranokala. Nilaza ny fanitsiana dia fetra 30 andro aorian'ny fandefasana azy ao amin'ilay tranonkala. Mety handà ireo fanitsiana ianao amin'ny fisafidianana ny lisitry ny mailaka.